Local News – Page2– Ever Best
ဖြားနာဆေးခနျးတှကေနေ အနံ့ပြောကျလူနာတှကေို ပွနျလှှတျရတဲ့ အကွောငျးရငျး ဆရာဝနျ ကိုယျတိုငျ ရှငျးပွီ လေး စား အပျပါသော….. အမတျမငျးမြား ခမြာ…. Fever Clinic မှာ အနံ့ပြောကျလူနာတှေ ပွနျလှှတျနရေတယျ ဆိုတာ တဈကယျပါ…. အမတျမငျးတို့ […]
ကျိုင်းတုံမြို့နယ်တွင် တိစ္ဆာန်များမှ လူကိုကူးစက်တတ်သော ရောဂါဖြစ်သည့် လက်ပ်တို စပိုင်ရာ (Lepstopira Species) သံသယလူနာများ တွေ့ရှိနေကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်။ သတင်း ရတာကတော့ (၄)ယောက်လို့ ပြောတယ်။ ဆေးရုံကြီးမှာ ရောက်နေတယ် ဟု […]
မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက်ခေတ်ထဲမှာ မိန်းကလေးများ အထူးသတိထားသင့်တဲအရာ(Q သူသောနှင့် ချစ်သောသူ)
By Ever BestPosted on September 25, 2020 September 25, 2020
ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ မိုဘိုင်းဖုန်း နဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုမှာ လူတိုင်းနည်းပါး သုံးနေကြပြီဆိုတာ မထူးဆန်းပါဘူးနော်လူငယ်တော်တော်များများ အင်တာနက်ပေါ်ကနေချစ်ကြိုက်ကြပြီး ပြသနာတွေတက်လာတွေလည်းရှိသလို အဆင်ပြေသွားကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဓိကပြောချင်တာက မိန်းကလေးများကိုပါ Internet သုံးရင် chat Box ကနေစကားပြောကြရာမှာ မိမိကို Q […]
ယခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ ခရီးသွားလာရခက်ခဲတဲ့ အချိန်မှာ ဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ရန် ကုသိုလ်ပြုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် မဂၤ လာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္ဆုံပါေစ ဒီဘုရားသမိုင္းအေၾကာင္းေလးအခ်ိန္တမိနစ္ေလာက္ေပးဖတ္က်ိေပးပါ ပရိသတ္ႀကီး သိပီးရင္လည္းေက်ာ္သြားနိင္ပါတယ္ မသိေသးတဲ့သူေတြတြက္ဖတ္ေပးပါ။ ဒီဘုရားကို ေက်ာက္ပိ ဘုရားလို႔ေခၚပါတယ္ဘီးလင္းၿမိဳ႕မွာတည္ရွိတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားကိုဖူးေျမာ္မယ္ဆို ေတာင္အထြတ္ထိပ္ထိတက္ရပါတယ္အရင္ကသူပုန္နယ္ေျမမို႔ဘုရားကိုဖူးရန္မလြယ္လွပါဘူးဘုရားရဲ႕သမိုင္းကိုနည္းနည္းေလးရွင္းျပပါရေစ ဘုရားေပၚမွာပိေနတဲ့ေက်ာက္တုံးႀကီးက ႐ိုး႐ိုးေက်ာက္တုံးမဟုတ္ပါဘူး ဖားပုံစံ […]
မြန်မာပြည်တွင် လက်ရှိခံစားနေတဲ့ ဗစ်ကပ်ရောဂါ ပြီးဆုံးမည့်အချိန်ကို အတိအကျ ပြောမရဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကြေညာ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ရဲ့ Stay at Home ရလဒ် နှစ်ပတ်ကြာမှ သိသာမယ် .. ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ပြုလုပ် လိုက်တဲ့ Stay […]
အတ္တကြီးပြီး History လိမ်လည်ပြောမှု တစ်ခုကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ ပဲခူးဆေးရုံကြီးက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ
By Ever BestPosted on September 14, 2020
မနေ့ကပဲခူးက Positive ထွက် တဲ့လူနာ ၂ ယောက်မှာလူနာ တစ်ယောက်က History လိမ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်၊သူနာပြုတွေဆိုတာ ဘယ်သူ့ကို မဆိုblame မလုပ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ဒီလူနာကတော့ တော်တော်ဆိုးဝါးလှပါတယ်၊ရန်ကုန်က ပြန်လာတယ်၊Q ဝင်ခိုင်းတာကိုဒေါသထွက်ပြီး မှန်ကို လက်သီးနဲ့ထိုးတယ်တဲ့။မှန်ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးဖူးတဲ့ လူတွေ […]
အာဏာပိုင် များ က မြူးဇစ်ဇုန် ( Music Zone ) KTV ပိုင်ရှင်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိ၊ တရားစွဲဆိုရန် အထက် အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြထား ဟုဆို
By Ever BestPosted on September 13, 2020
မြူးဇစ်ဇုန် ကာရာ အိုကေဆိုင် တွင် ပိုးတွေ့လူနာ အများအပြာ းတွေ့ရှိ ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ပိုင်ရှင်အား သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ အရ တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် အထက် ဌာနအဆင့်ဆင့် သို့ တင်ပြထားကြောင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ကိုဗစ် […]
By Ever BestPosted on September 12, 2020
ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ားအနက္ စုစုေပါင္း (၆၇၆) ဦးအား ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိ‌ေသာ အသက္ (၇၀) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား (Case-2351) သည္ ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ […]
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ခြေကုန်လက်ပန်းကျပါက ကျန်းမာရေးစနစ်ကြီး တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသတိပေး
ကိုဗစ် ၁၉ ဒုတိယလှိုင်းတွင် ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ ခြေကုန်လက်ပန်းကျပါက ကျန်းမာရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး က သတိပေး ပြောကြားလိုက်သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ covid 19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် […]